June 2, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Puntland, Somalia, Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 11
Wararka hoose oo ay heleyso Marqaannews ayaa waxaa sheegayaan in uu socdo qorshihii ugu dambeeyay ee ay Puntland iyo Somaliland isku weydaaran lahaayeen Maxaabiistii ay kala qabsadeen.
Labada Maamul ayaa birri oo Isniin ah si rasmiya isu dhaafsanaya maxaabiistii labada dhinac ay ku kala qabsadeen dagaalladii ka dhacay degaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
Labada maamul ayaa hore u saxeexay Heshiis maxaabiis is-weydaarsi ah oo ay fududaysay hay’adda Laanqeyrta Cas ee caalamiga inkastoo aan warbaahinta laga shaacin heshiiskaasi.
Puntland ayaa dagaalladii Tukaraq ku qabatay 19 maxbuus balse 16 kamid ah oo u dhashay gobollada SSC ayaa la sii daayay kadib markii la dhaqan-celiyay waxaana hadda gacanta Puntland ku haray saddex maxbuus oo u dhashay gobollada Waqooyi galbeed.
Saddexda maxbuus mid kamid ah waa taliye ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Somaliland halka labada kale ay yihiin askar.
Somaliland ayaa dhankeeda dagaalka ku qabatay 14 maxbuus oo ka tirsanaa ciidamada Puntland kuwaasi oo dhammaantood ay gacanta ku hayso mana jirin cid ay ka siidaysay Somaliland.
Bal marka hore naga daa qosol gariirka iyo magacyadan iyo magacyo la’aantan aad kaligaa isugu camirto oo aad bogagga nooga buuxiso maandhe.
Waa marka labaad ee aan kaa shaafiyo khayaalka aad isku qancisay ee ay qaaddiradu kaaga tustay in aad dad kale deegaankooda adigu ka taliso waayo waa been xaqiiqada dhabta ah aad uga fog. Cid aad ka xiniinyo weyntahay ma jirto ee doolarka ayaa lagaa furanayaa.
Landlessoow, dadka deegaannada SSC leh qaar ka mid ah ayaa iskooda iyo danahooda gaar ahaaneed tuutaha SNM u xidhay laakiin muhiimaddu waxaa weeyaan in ay yihiin dadkii dhulalkaa u dhashay oo ku na sugan. Maleeshiyo iidoor baa dad kale xoog ku haysata waa hadal majnuun iyo hawraar marqaanka lagu yaqaanno.
Adiga oo saaxi ah dadka ma la doodi kartaa jaalle?
Adigii baa toban magac sita malaha iskala garan maysid oo afkaagaa iyo dhagahaahagu isma maqalaan oo gacmahaaga iyo lugahaagu kala socdaane…
Adnaan..iyo qaar kaloo badan…
Aar anigu meesha inaan twaawaciina daawado uun baan usoo galaa.
Mida kale anigu lahaystayaasha lamaba doodoo, maxaan kala doodii dameer korkeeda saaranahay, dhuuso inay igu waasho marabo dee.
Waxaan kugu haystaa dhulkaaga weeyee…adigu iguma haysatid dhulkayga…spot the damn difference!!
Maxaan kalaaa doodaa markaas!!??
Maalinta aan adiga iyo anigu dhulkayga ISAAQ isku qabsano maalintaas baan kula doodi karaa …laakiin maantaa adiga ayaan dhulkaagaa kugu haystaa!!
Sidaa daraadeed anigu halkan waxuun baan usoo galaa inaan daawaado TWAAWACAAGAA…maxaa yeelay 500 jeer baa kelmada IDOOR ku xushaa sheekadadaa sidii aayado QURAAN AH.
Markaa inaan ku raaxaysto soo mahaa magacayga la kor dhabaayo…ALLUF LAKORDHABEE ALUF LAHOOS DHABEE ALUF LAAGUDEE!!
In aad foodleyda sidooda u hadaaqdo garaadkaaga yar iyo maskaxda aan ta injirta ka weyneyn weeye ee iska dinaah maandhe. Anigu dowgiina ayaan aqaannaa oo kol ba waan idiin camiraa oo idinna waydun is ka sii fatahdaan. Tawaawac ma jiro oo dhul na anaga ayaa kaa qanisan oo kun jeer kaa fac weyn.
Walleydaan ciid dad kale leeyahay u calfanahayn ee cidladaas uun ka ciiya yeydooda sidooda. Labo midh oo uu naqasku ku baxay oo idin la yar geerasheeyay baad tuutaha u soo labbisteen oo adiga ku la weyn, laakiin anaga agteena kuwaasu waa ka qashinka aynu 18 May dheegaanka ka xaaq xaaqno.
British Somaliland waa Saldanadda Maakhir oo dabacayuuntu raaciyad bay waligood ba ka ahaayeen. Ma af aad ku hadasho ayaa kugu yaalla ba!
War barnaaminkii HAKIS ee reer BURCO ayaan daawanayaa!!
Ninkii qosol raboow waaa kukaas!!
SUXUFIFA SUXUFIYIINTA UGU EDEB DARI WAA.
B CABDI SHKUUR DAYIB..
T BADRI KOOZAAR
J YAASIIN DHAGACADE
X CABDIRAHMAAN CAMAAR….aad ugu fiirso!!
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk what a talented teen!!
Mingis Tunte ..
Yeah…that’s what I’m talking about.
Let’s start the MINGISKII & DURBAANKII iyo FOOXII AMA LUBANJII..
JUMANJI ..daawo MOVIE gaa…🤣🤣
To:Sxb:= Isaaq”- intuu NABADA KUGU YEELO COLAADA KUGUMA YEELO. ?..
Somalilander”- adigana talo iga hoo. (waxaa inoo Balan AH WELLCOME TO GAROOWE= MAJEERTEEN *(Libaax Nin Aan Aqoon Baa LAX KA RITA?..
1)MAJERTEEN DAGAAL UGU YIMAADA =KAMA NOQDO(GEERI IGA/DHEH)
2)MAJERTEEN NINKII DAGAAL UGU YIMAADA (XAASKIISA/ ASAAY BEY QAADAA)
” Ceesaantii mas iyo good madax Majeerteen leeftaa, jeegaanta malageed Baa Galayeeeeeeeeeeeeeee? soo soco fuley to fuley(car soo dhaqaaq ?…somalilander:CAR-(one step forward two steps back)